मुलुकमा जनताहरु राजनीतिक पार्टी भक्त र नेताहरू भक्त छन यसकारण एमसीसी रोक्न सेनाहरुले जोखिम मोल्ने किन ? एमसीसी रोक्न सेनाहरुले साथ दिने किन ? सेनाहरुले सराहनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । एमसीसी परियोजना रोक्न नेपाली सेनाहरुले साथ दिएनन भन्ने कुराको गुनासो व्यापक रूपमा सामाजिक संजालहरुमा आईरहेको छ । एमसीसी परियोजना रोक्न सेनाहरुले साथ दिएनन ठिक कुरा हो । म नेपाली सेनाहरुको पक्षमा छु नेपाली सेनाहरुले जे गरेको छ ठिक गरेको छ अत्यन्त राम्रो र सराहनीय कार्य गरेको छ । एमसीसी रोक्न सेनाहरुले साथ दिने किन ?
राजसंस्थाको विरोधमा सडकमा उफ्रि उफ्रि जथाभावी नारा लगाउने यिनै जनताहरु होइनन र ? जताततै राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्ने यिनै जनताहरु होइनन र ? जनयुद्ध कालमा सुरक्षाकर्मीहरु मार्ने यिनै माओवादीहरु होइनन र ? मुलुकलाई भन्दा नेताहरूलाई महत्त्व दिने यिनै जनताहरु होइनन र ? सहि कुरालाई सहि भन्न नसक्ने रमिता हेर्ने र मुकदर्शक बन्ने यिनै जनताहरु होइनन र ? दोग्लागिरी, द्वैध चरीत्र र अवसरवादी यिनै जनताहरु होइनन र ?
राजनीतिक पार्टीहरु भक्त र नेताहरू भक्त यिनै जनताहरु होइनन र ? एक शब्द सेना आउ देश बचाउ भन्न नसक्ने यिनै जनताहरु होइनन र ? नेपालमा वास्तविक जनताहरु कहाँ छन ? एमसीसी परियोजना रोक्न सेनाहरु मात्र विवादित र नराम्रो बन्ने किन ? यसकारण एमसीसी परियोजना रोक्न सेनाहरुले साथ दिएनन भन्नु गलत र अपरिपक्व कुरा हो एमसीसी रोक्न सेनाहरुले साथ दिने किन ?
मुलुकमा द्वन्दको जड नै नेपाली जनताहरु हुन ।नेपाली जनताहरु वास्तविकमा नै भेडा हुन । मुलुकमा जनताहरु नै को छ र ? सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु मात्र छन । सेनाहरुले जोखिम मोल्ने किन ?
हिन्दीमा उखान ‘चोर चोर मौसरे भाई’ र नेपालीमा उखान ‘म कुटे झैं गर्छु तँ रोए झैं गर’ नेताहरूको झुक्याउने तरिका हो र यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, के. पी. शर्मा ओली, अग्नि सापकोटा, बाबुराम भट्टराई काँग्रेस, नेकपा समाजवादी, माओवादी र जसपाका नेताहरूले सबैलाई झुक्याएर एमसीसी पास गरेका हुन् ।
नेपाली जनताहरुले नेपाली जनताहरु वास्तविकमा नै भेडा हुन भनी प्रमाणित गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, अग्नि सापकोटा, बाबुराम भट्टराई काँग्रेस, नेकपा समाजवादी, माओवादी र जसपाका नेताहरू र सांसदहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा नेपाली जनताहरुलाई झुक्याई एमसीसी पास गरे ।
मुलुकमा द्वन्दको जड नै नेपाली जनताहरु हुन । अमेरिकाको राजदुत, एमसीसीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतहरुले विक्रम सम्वत २०७८ साल फागुन महिनाको १४ गते र १५ गते पनि एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि संशोधन र फेरबदल हुँदैन भनेको थियोे । अमेरिकाको राजदुत, एमसीसीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतहरुले २०७४ साल एमसीसीको सम्झौतामा नेपालका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेदेखि एमसीसी परियोजनामा संशोधन र फेरबदल हुँदैन सम्झौता भए बमोजिम जस्ताको तस्तै गरिनुपर्छ पटकपटक भनेको थियो ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रम्प, राजदुत रेन्डी बेरी, एमसीसीको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायतहरु दोषी र जिम्मेवार होईन यसकारण गाली गर्नु अनुचित छ । दोषी, जिम्मेवार, राष्ट्रघाती र देशद्रोही हाम्रो मुलुकको सांसदहरू र नेताहरू हुन ।
मुलुकमा द्वन्दको जड नै नेपाली जनताहरु हुन । यसकारण सेनाहरु, जनपथ प्रहरीहरु र सशस्त्र प्रहरीहरुले साथ दिएनन भनेर गाली गर्नु पनि शोभनीय होइन सुरक्षाकर्मीहरुलाई गाली गर्नु अनुचित छ । साथ दिने समयमा जनताहरुले मुलुकको जनता नभई पार्टीहरुको कार्यकर्ता बनी सांसदहरू र नेताहरूलाई साथ दिए । नेपालमा जनताहरु को छ र ? सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु मात्र छन । सुरक्षाकर्मीहरुले जोखिम मोल्ने किन ?